Kuvimbika Kwechigadzirwa Kwakanyatsofa Here? Kana Kuvimbika kweVatengi? | Martech Zone
Kuvimbika Kwechigadzirwa Kwakanyatsofa Here? Kana Kuvimbika kweVatengi?
Muvhuro, Zvita 18, 2017 Mugovera, Kukadzi 13, 2021 Douglas Karr
Pese pandinotaura nezve brand brand, ini ndinowanzo govana yangu nyaya kana ndichitenga mota dzangu. Kwemakore anopfuura gumi, ndaive ndakavimbika kuna Ford. Ini ndaida masitayera, mhando, kugadzikana, uye kukosha kwekutengesa zvakare kwemotokari yega yega nerori yandakatenga kuFord. Asi izvo zvese zvakachinja makore gumi apfuura mota yangu payakayeuka.
Pese paitonhora tembiricha pazasi pechando uye hunyoro hwainge hwakakwirira, madhoo emota yangu ainyatso vhurika. Mune mamwe mazwi, kana iwe ukavhura musuwo hauna kukwanisa kuvhara. Mushure memwaka yakati wandei zvine njodzi ndakabata gonhi repadivi remutyairi rakavharwa, mutengesi wandakatenga mota kubva wakaramba kuushandira mahara zvekare. Ndakatarisa zvisingaite kumumiriri ndikamuudza kuti ndizvo hazvina kumbogadziriswa pamusoro pemakore. Maneja akaramba chikumbiro changu uye akataura kuti vaive vaita yekuyeuchidza pane zvaidiwa neFord uye vaifanira kutanga kundibhadharisa pese pandaiunza mota mukati.
Pamberi penguva iyoyo, ndaive ndakavimbika kuchiratidzo. Nekudaro, izvo zvakachinja ipapo pandakaona kuti iyo mhando yakanga isina kuvimbika kwandiri.
Ndakanga ndashatirwa zvekuti ndakatyaira Ford yangu kuyambuka mugwagwa uye ndikachinjanisa mota neCadillac itsva. Mwedzi yakati gare gare, ndakataura nemwanakomana wangu kubva pakutenga Ford iye ndokutenga Honda. Nekudaro, nemari isingasvike zana remadhora pabasa, Ford yakarasikirwa nemhando mbiri dzemotokari nekutadza kuvimbisa kuti ndakachengetwa semutengi.
Wese munhu anogara achibvunza kuti kana kwete brand kuvimbika afa. Ini ndinotenda tinofanirwa kubvunza zvinopesana, ndizvo kuvimbika kwemutengi akafa?
Chete 23% yevatengi vakavimbika kune chero brand mazuva ano Nei? Zvakanaka, nekutenda neInternet pamaoko edu, isu tine sarudzo. Dzimwe nguva mazana ezvesarudzo. Iko hakuna kudikanwa kwekuvimbika kune chinetso chiratidzo, vatengi vanogona kupedza 30 masekondi uye vawane nyowani nyowani Uye pamwe mucherechedzo unonyanya kutenda bhizinesi remutengi.
Nei Vatengi Vachirambana neBrand?
57% yevatengi vanoputsa neiyo brand kana yavo wongororo dzisina kunaka dzinoramba dzisingatauri nepo zvigadzirwa zvakafanana zvichiramba zvichipiwa
53% yevatengi vanoputsa neiyo brand kana yave nayo kudonhedza dhata uye kutyora dhata
42% yevatengi vanoputsa neiyo mhando kana paine hapana mhenyu / chaiyo-nguva vatengi tsigira
38% yevatengi vanoputsa neiyo mhando kana paine hapana kutengesa panguva uye kukwidziridzwa kana zvinopihwa
Munyika yezvideredzwa uye zvinhu zvinoraswa, ndinotenda mabhizinesi akarasikirwa nekuona kukosha kwemutengi akavimbika. Gore gore, ini ndinobatsira mabhizinesi kutyaira akawanda anotungamira uye kutora kune avo zvigadzirwa uye masevhisi. Kana vachindibvunza izvo zvavanogona kunge vachiita zvirinani, ndinotopota ndichivatanga kuvabvunza nezve kwavo kuchengetedza uye kutendeka zvirongwa. Kupenga kwandiri kuti makambani anoshandisa mazana kana zviuru zvemadhora kuti awane mutengi, asi achivarambira ruzivo rwevatengi runogona kutenga chidimbu cheiyo.
Kunyangwe sesangano, ndanga ndichishanda pane yangu nzira yekuchengetedza. Pandaive nemari yevashandi gore rino, ndakarasikirwa nezvakatarisirwa nevatengi. Ndisati ndarasa vatengi, ndakasangana navo, ndikabvisa zvibvumirano zvavo, uye ndikapa sarudzo dzemaitiro ekuti basa riitwe. Ndinoziva kuoma kwazvinoita kuwana kuvimba kwevatengi uye kana iri panjodzi, ndinoziva kuti ndinofanirwa kukwira ndoyedza kuzviita zvakanaka. Izvo hazvishande nguva dzese, asi zviri nani kwazvo kupfuura kudzingwa basa uye kutendeuka pamusoro pevatengi kuruboshwe uye kurudyi.
Isu takango govana infographic kubva kuBolstra pa ROI yeKuvimbika kweVatengi. Vatengi vanobudirira mapuratifomu senge avo anoshandiswa kudzidzisa vashandi vemukati, kuona nyaya dzinotyaira vatengi kusiya, uye kukubatsira kuyera kukanganisa kwekubudirira kwevatengi pane yako maricho purofiti. Masoji akura ari kuona kuti purofiti yavo yese inokanganiswa zvakanyanya kana chengetedzo yavo yevatengi yadonha. Uye kuzadza bhaketi kuri kungo shanda kusvikira iwe wapererwa nemari - izvo zvatinoona nekuwanda kwekutanga.
Heano akazara infographic kubva kuRave Ongororo, Brand Kuvimbika kwakafa:
Tags: brand kuvimbikabrand brand kuvimbikakuvimbika kwemutengiMabatiro evatengivatengikuputsa kwedatakudonhedza dhataLive Chatrarama vatengirarama rutsigirozvirongwa zvekuvimbikawongororo dzisina kunakaMadhindindirave wongororochaiyo-nguva vatengikutengesa uye kukwidziridzwa
Synergy: MaMashambadziro Anowedzeredza Sei Midhiya Yakabhadharwa uye Inobhadharwa Midhiya ine Varidzi
Ahrefs Inotangisa Inoshamisa Inzvimbo Saiti Kuongorora Turu